Maninona aho no miasa maimaim-poana ary mety tsy diso i Wil Wheaton | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 31, 2015 Talata, Novambra 3, 2015 Douglas Karr
Tsy adihevitra ity lahatsoratra ity, ary tsy miezaka ny manomboka ady hevitra amin'i Wil Wheaton sy ny lahatsorany aho, tsy afaka mandoa ny hofan-tranonao ianao amin'ny alàlan'ny sehatra tokana ary hahatratra ny tranokalanay manome. Wil Wheaton dia marika efa niorina miaraka amina fanarahana lehibe. Niasa mafy izy hampivelatra ny mpihaino sy ny mpiara-monina - noho izany ny kiakiaka sy ny fifanarahana amin'ny fijoroany.
Wil Wheaton dia nahalala fomba tamin'ny valiny. Izy koa dia nahay nanao izany imasom-bahoaka… kapitalisma ratsy, manararaotra ireo andro ireo dia ny fahatezerana rehetra. Fa ny ankamaroantsika dia tsy Wil Wheaton. Ny ankamaroantsika dia manandrana mampitombo ny fahitana sy ny mpihaino antsika ary vonona ny hampiasa vola amin'izany. Fahafahana hahatratra ny mpihaino toa an'i HuffPo, raha ny tena izy, fampiasam-bola. Raha tokony handoa ny dokam-barotra ianao dia ny manome ny talentao no vidiny.
Andao aloha hodinihintsika ilay biby goavam-be, kapitalista antsoina hoe Huffington Post. Martech Zone mitohy manana fitomboana avo roa heny isan-taona. Taorian'ny folo taona an-tserasera, manohy manintona mpanjifa tena tsara ao amin'ny maso ivoho ny bilaogy, Highbridge. Ny fitomboan'ny fidiram-bola mivantana dia tsara, fa i Jenn (mpiara-miasa amiko) ary fantatro fa tsy maintsy manohy manambola amin'ny bilaogy izahay mba hanomezana vola azo ahazoana mivoaka amin'ny famoahana.
Rehefa mahatratra tombom-barotra lehibe (na tsy manilika ny asan'ny maso ivoho) aza ny famoahana dia mety mitovy ny fomba fandraisan'ny olona amintsika momba ny mpanoratra vahiny sy ny atiny natolotra. Mamoaka lahatsoratra vitsivitsy isan-kerinandro izahay avy amin'ny vahiny rehefa mino izahay fa handray soa avy amin'ny atiny ny mpihaino anay. Tsy manonitra ireo orinasa na olona ireo izahay.
Tsy manonitra ireo mpanoratra vahiny izahay (mbola) satria nanambola nandritra ny folo taona mahery izahay hampitomboana ny mpihaino. Manome vola farafahakeliny farafahakeliny ny fotoako isan-kerinandro amin'ny famakiana paozy, fifampiresahana amin'ireo orinasa, fanombanana ny sehatra, fanaovana podcast, fanamafisana ny fandaharan-dahatsary ataontsika, famakiana boky, fanatrehana hetsika ary fandoavana ireo sehatra manohana ny famoahanay. Matahotra aho ny hieritreritra ny vidin'io fotoana io… an-tapitrisany aho no manome lanja azy. Tsy afaka nandoa ny hofan-trano tamin'io fampiasam-bola io koa aho!
Nahavita nandoa ny hofan-trano i Wil Wheaton tamin'ny alàlan'ny lahatsorany momba ny Huffington Post? Tsy mino aho.
Sarobidy ny mpihaino antsika. Nandoa izany vola izany izahay nandritra ny ora maro sy dolara an'arivony tamin'ny fampiasam-bola mivantana sy fampiroboroboana. Ny fandoavana ny mpanoratra vahiny dia tonga amin'ny fotoana ahafahana manangana ny fahefany amin'ny mpihaino antsika ary manintona azy ireo hifandray amin'izy ireo noho ny antony ara-barotra. Ireo orinasa nanam-bola amin'ny fanoratana atiny lehibe miaraka aminay dia nahatsapa kolaka vola azo avy amin'ireo lahatsoratra ireo. Ka, na dia mbola tsy nandoa azy ireo tamin'ny atiny aza aho, dia nandoa izany ny mpihaino anay
Ho antsika izay tsy malaza ary manohy miasa mafy hampitombo ny fahefantsika sy hahatratra amin'ny Internet, ny fotoana hanatonana sy hisarihana mpihaino olona iray manohy mampiasa vola dia fotoana mety. Tsy mino aho fa fanararaotana mihintsy… fanararaotana ifanarahan-tombony ifampiresahana ny tombony azo.
Ny tena izy dia naloa ilay matihanina PR izay nanatona an'i Wil Wheaton. Ka mandany vola i HuffPo hangataka olo-malaza toa azy. Mino aho fa mety afaka nifampiraharaha Andriamatoa Wheaton tamin'ny fifanarahana iray izay mety hahazoany tombony - na mivantana na ankolaka. Ireto misy fomba vitsivitsy:
Fampiroboroboana ny boky - Andriamatoa Wheaton dia mpanoratra nahomby. Angamba azony natao ny nifampiraharaha momba ny fampiroboroboana maimaimpoana ny bokiny manerana ny mpihaino Huffington Post. Mety ho vita tamin'ny antso-to-hetsika mifandraika amin'izany amin'ny sokajy na lohahevitra sasany, na ny fangatahana ny Huffington Post hamerina hijery ireo boky ireo amin'ny varotra. Mety hiteraka fivarotana boky vitsivitsy izany!
Antso-To-Action - Andriamatoa Wheaton dia mety afaka nifampiraharaha fiantsoana andraikitra tao anatin'ny bio-ny Huffington Post izay nanentana ny olona hamandrihana an'Andriamatoa Wheaton mba hilazana fotoana mety hitenenana. Ny fitenenana dia fampidiram-bola ahazoana tombony ho an'ireo manana satan'ny olo-malaza toa an'Andriamatoa Wheaton.
HuffPo Hetsika - Miaraka amin'ny HuffPost Live, Huffington Post dia mampiroborobo sy manohana hetsika isam-paritra sy nasionaly ihany koa. Angamba Andriamatoa Wheaton dia afaka nifampiraharaha momba ny fahafahany ho mpitondra tenin'ny olo-malaza karama amin'ireo hetsika ireo - ary manana sonia boky amin'izy ireo aza.
Ny fehiny dia mino aho fa afaka nanana mora foana Andriamatoa Wheaton voambaka fikambanana toa an'i HuffPo mba hisarika ny sain'ny maro, ny mpihaino, ary - amin'ny farany - vola miditra aminy. Ary io vola miditra io dia mandoa ny hofan-trano!
Maninona aho no miasa maimaim-poana
Manoratra aho maimaim-poana ao amin'ny tranokalako no anoratako maimaim-poana atiny ho an'ireo tranonkala hafa izay tiako hirotsahana amin'ny mpihaino azy ireo ary miteny aho maimaim-poana amin'ny hetsika izay manana fanantenana andrasana hifaneraserana amiko. Mazava ho azy fa manoratra koa aho karama atiny ho an'ny mpanjifanay ary izaho dia karama miteny amin'ny hetsika hafa. Indraindray, dia mandoa ny diantsika mankany amin'ny hetsika nasionaly fotsiny isika mba handrakofana izany amin'ny famoahana azy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mandoa vola aho indraindray mba hahatratrarana ny mpanatrika ireo hetsika ireo!
Ny fahafaha-manao tsirairay dia manombana mifototra amin'ny fomba mety hahazoantsika tombony amin'ny fipoahana sy ny olona mety hifandraisantsika ao. Our miasa maimaim-poana tetika nahazo tombony be ho anay. Ny fandaniam-bola amin'ny hetsika iray dia nifatratra tamin'ny fanatanterahana fifanarahana izay tsy azontsika raha tsy tamin'ny marika nasionaly. Niteraka marika hafa io marika io. Ary mitohy hatrany.
Noho izany, afaka nokaramaina dolara an-jatony aho tamin'ny famoahana bilaogy iray. Na, afaka nanidy orinasa niaraka tamin'ny mpijery aho ary nanangona an'aliny na an'arivony dolara amina fifanarahana. Fantatrao izao ny antony iasako maimaim-poana.
Raha ny marina, tsy miasa maimaim-poana fotsiny aho - Matetika aho dia mandoa vola hiasa maimaim-poana! Amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Dittoe PR, dia nanambola be izahay tamin'ny fitadiavana mpihaino kendrena sy mifanaraka tianay ho tonga. Ny ekipa manan-talenta ao amin'ny Ditto PR mametraka ny talentako amin'ireo famoahana ireo hanararaotana ireo fotoana ireo. Manohy mijinja ny tombontsoa azo avy amin'izany fifandraisana izany izahay - manao asa ho an'ireo orinasa amin'ireo mpijery izay tsy ho nihaona taminay raha tsy izany.
Ny fahefana ara-pitondrantena
Ianao ve mandrakizay manampy ny olona nefa tsy mandray karama? Efa naka fakofako ve ianao ary nanary azy tao anaty fako? Efa nanome olona tsy manan-kialofana vola hohanina ve ianao? Fa maninona no hataonao izany? Mandoa vola be amin'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta izahay mba hitandroana ny fahadiovan'ny arabenay sy hanampiana ireo izay sahirana. Mbola ataontsika ihany anefa izany satria mangoraka.
Tsy te hiaina anaty tontolo iray izay tsy anaovan'ny olona na inona na inona aho, raha tsy omena onitra azy ireo. Amin'ny maha-tompona orinasa ahy, azoko atao ny manome toky anao fa tsy hanana asa aho raha izany no toetra noraisiko. Manana namako maromaro aho izay tsy mahita toa izany, ary avy eo henoko ny fahasosoran'izy ireo fa tsy nitombo mihitsy ny orinasan-dry zareo. Mino aho manampy ny olona aloha no fitaovana lehibe indrindra hampitomboana ny orinasako. Ary raha manampy olona maimaim-poana aho dia matetika izy ireo no miantso ny orinasako amin'ireo mpanjifa be karama.
Tsy manontany tena momba ny fitondran-tenan'Andriamatoa Wheaton aho, saingy manontany tena aho fa ny orinasa mitady tombom-barotra dia manararaotra olona iray amin'ny fangatahana azy ireo hanome ny talentany amin'ny varotra. Mitrandraka ve Andriamatoa Wheaton fa manana vola i Huffington Post na eo aza ny risika sy ny fampiasam-bola lehibe vitany tamin'ny fananganana ny vondrom-piarahamonin'izy ireo? Nandoa vola izy ireo ary manohy mandoa ny fikolokoloana sy ny fampiroboroboana ny famoahana azy - maninona no tsy jerena izany?
Mamaky aho The Slight Edge amin'izao fotoana izao nataon'i Jeff Olson ary ny fampitahana azy dia an'ny tantsaha. Mamboly ny sisiny, mamboly azy, ary avy eo mioty ny tombony. Ny mpamboly iray dia tsy mahazo karama hamboly ilay voa, vao mahazo karama izy rehefa voavoly tsara ilay voa ary miteraka ny vokatry ny asany. Mamporisika ny olon-drehetra hamboly masomboly na aiza na aiza misy dikany aho… hamokatra betsaka ianao raha vantany vao manao izany!
Miaraha aminay ao amin'ny Blab
Hiresaka momba an'io lohahevitra io izahay sy Kevin Mullett amin'ny Alakamisy izao Blab ao amin'ny Match Cage Marketing manaraka! Manantena aho fa afaka hiaraka aminay ianao.
Tags: lahatsoratra huffingtonatiny karamaatiny tsy voaloawil wheaton
Tokony hampiasa vola amin'ny fanaraha-maso ny tsikera an-tserasera hitantanana ny laza ve ianao?
2 Novambra 2015 à 9:26
Nanaiky. Anjaran'ny mpanoratra ny manapa-kevitra raha mahatsapa izy ireo fa hanonitra azy ireo amin'ny fotoanany sy ny ezaka ataony ny fampiharihariana. Tsy mitovy amin'ny tanora mpanoratra tsy miankina asaina manoratra maimaim-poana (na amin'ny 6 cents/teny, darn akaiky azy) nefa tsy mahazo crédit mpanoratra. (Ary azoko antoka fa ambany karama ireo mpanoratra ireo!)
Amin'ny farany dia misy fifanakalozam-bola ary ny toerana misy an'io tsipika io dia hiova rehefa mandeha ny fotoana sy ny famoahana azy. Na dia niasa ho mpanoratra mahaleotena matihanina aza aho, dia tsapako fa misy ambaratongam-pahefana: arakaraka ny maha-mankaleo ny asa sy ny kely kokoa ny fankasitrahana azy, ny ambony ny karama. Noho izany dia afaka mandoa tsara ny fanoratana boky ara-teknika. Ny fanoratana tantara foronina matetika dia miafara amin'ny tsy fandoavana na inona na inona fa mbola afaka mahafa-po lalina ny mpanoratra.
3 Novambra 2015 à 12:19
Mbola miady hevitra aho fa ny vola no fandrefesana ny sandany. Ireo tanora tsy miankina miasa amin'ny 6/cents ny teny na darn akaiky azy dia manangana resadresaka sy manaja ny asany. Tsy nahazo vola aho fony aho tanora matihanina. Rehefa miasa amin'ny asa tananao ianao ary mihatsara kokoa dia lasa sarobidy kokoa ianao. Niasa tao amin'ny gazety iray aho taloha izay nampiharana herisetra sy nahazoana karama mahatsiravina ireo mpamorona, saingy nampianatra azy ireo hanatsara ny fahaiza-mamorona sy ny fahavokarany ary ny fianarana sehatra tsy hitany tany am-pianarana ny fahafahana. Ireo fahaiza-manao ireo dia nahatonga azy ireo hifaninana bebe kokoa amin'ny toeram-piasana ary afaka nahita asa mahagaga izy ireo.
Ny hoe tsy mahazo karama androany ianao dia tsy midika fa tsy manangana sanda ianao ary ho voaloa amin'izany sanda izany any aoriana.